ကမ္ဘာအသစ်စိန်ခေါ်မှုအသစ် သိပံ္ပပညာအသစ် | LLCO - အလင်းရောင် ကို ဆောင် ကျဉ်းပေးလာသော ကွန်မြူနစ်အဖွဲ့အစည်း
၁၉၆၅ ခုနစ်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး လွတ်မြာက်ရေးတိုက်ပွဲများမြင့် တက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် လင် ဘိုင် အိုဟာ
ချမ်းသာတဲ့နိင် ငံနင့် ဆင်းရဲတဲ့နိင် ငံအကြား
ခွဲခြားမှုကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်အဲဒါဟာ အခုချိန်ထိအဓိကအ ခြေခံကျသော အချက်တစ်ခုဖြစ်နေတုန်းပါဘဲ လင် ဘိုင် အိုဟာပြည်သူ့စစ်ပွဲတွေကြားမှာကမ္ဘာ့တော်လှန်ရေးဆိုတာကိုမြင် တွေ့ခဲ့ပါတယ် မော်စီတုန်းတရုတ်ပြည်တွင် စတင် ခဲ့သောပြည်သူ့စစ်ပွဲကဲ့သို့ တောကိုအ ခြေခံ၍မြို့ကြီးများကိုဝိုင်း ထို့အတူကမ္ဘာ့ကျေးလက်ဒေသကိုအ ခြေခံ၍ ကမ္ဘာ့မြို့ကြီးများကိုဝိုင်း လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် အဲဒီအ ခြေခံသ ဘောတရားဟာ ၁၉၆၅ က နေအခုချိန်ထိမှန်ကန်နေတုန်းပါဘဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာကြီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာစုနစ်ဝက်လောက်မှာကြီးမားစွာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ နိင် ငံရေးစီးပွားရေး အဆင့်အတန်း တော်လှန်ရေးအုပ်စု နင့်လက် တွေ့လုပ်ငန်းတွေဟာထိုကဲ့သို့ သောစိန်ခေါ်မှုများကို မှီ၍ အမှီလိုက်နိင် ရပါမယ် ဒါက တော့ တော်လှန် ရေးသ ဘောတရားအားဖြင် နားလည် ရမယ့်အ ခြေခံကျသော သ ဘောတရားတစ်ချို့ဖြစ်ပါတယ်
(၁) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျမှုဟာ ပုံစံအသစ်များကိုယူဆောင် သွားပါတယ် နယ်ချဲ့ဝါဒဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနိမ့်ကျတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဟာနိင် ငံမှတစ်နိင် ငံဆီသို့ပင် လျှင် ဆက်လက်ဆောင် ရွက်သွားရပါမယ် အတိတ်ကာလမှာလဖွံ့ဖြိုးတယ်လို့ယူဆခံရ သောနိင် ငံများဟာ စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပြီးမတူကွဲ့ပြားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလည်း ရှိခဲ့ကြပါတယ် အဲလိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိင် ငံများဟာ နယ်ချဲ့ဝါဒီနိင် ငံများဖြစ်လာပြီးတစ်ချို့တွေက တော့ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီများဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီနိင် ငံတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ကြပြီးသူတို့တွေရဲ့လုပ်သားတွေနင့် အရင်းအမြစ်များကိုသူတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းသိမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် အချက်အားဖြင့် နယ်ချဲ့ဝါဒီ နိင် ငံတွေဟာသူတို့တွေရဲ့လက် ဝေခံနိင် ငံတွေနင့် ကိုလိုနီနိင် ငံများရဲ့ အားတွေနင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်ဥပမာအ နေနင့် အ နာက်ဥ ရောပ နင့် မြောက် အ မေရိကတွေရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင် ရာတော်လှန်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဟာ ကိုလိုနီနိင် ငံများမှ ကျွန်ကုန်များနင့် အဖိုးတန်သောပြောင်းရွေ့မှုများကြောင့် တိုးတက်မှုတစ်ခု လုပ်ဆောင် ဖို့ ဖြစ်နိင် ပါတယ် ဈေးသက်သာသောလုပ်သားနင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများဟာ ဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကိုလူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု ဟာအ နောက်တိုင်းရဲ့ခေတ်မှီတိုးတက်မှုထဲမှာ
အသစ်ကိုလိုနီဆိုင် ရာ ဈေးကွက်များကိုဖွင့်ပေးနေပါတယ် အဲဒီနည်းလမ်းဟာဒီနေ့ထိလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးနင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင် နေပါတယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ခေတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိမ့်ကျမှုဟာအတိတ်က နိမ့်ကျမှုထက် အဆင့်များစွာမတူကွဲပြားတော့ပါဘူးအတိတ်ကာလမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနိမ့်ကျမှုဟာ စက်မှုလုပ်ငန်းများရှားပါးမှုနင့်ကုန်ထုတ်ပစ္စည်းရဲ့ တနည်းအားဖြင့်အတိတ်, စက်မှုနှင့်အမျိုးမျိုးနီးပါးအမြဲဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ နှင့်အညီ, စက်မှုနှင့်အမျိုးမျိုးမရှိခြင်း၏မရှိခြင်းနီးပါးအမြဲဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနှင့်အတူဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒီအဟောင်းပုံစံတချို့နေရာများတွင်ဆက်လက်သော်လည်းအခြားသောအရပ်တို့ကိုအသစ်ပုံစံများထွန်းသစ်စကြသည်။ သူတို့တခါကဲ့သို့ယနေ့ချမ်းသာကြွယ်ဝ, နယ်ချဲ့နိုင်ငံတွေမှာမရှိတော့စက်မှုကြသည်။ ယနေ့ပထမဦးစွာကမ္ဘာ့ဒေသအများအပြားအတွက်, နည်းပါးလာခြင်းနှင့်နည်းပါးလာလူစက်ရုံတွေမှာအလုပ်ကြသည်။ အဲဒီအစား ပို. ပို. လူဖြန့်ဖြူး, စီးပွားရေး, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အများပြည်သူကဏ္ဍတွင်အလုပ်ကြသည်။ ပထမကမ္ဘာ့ဒေသအများအပြားတွင်, လူဦးရေ ပို. ပို. လောင်ပေမယ့်ဒီထက်နည်းနည်းထုတ်လုပ်သည် ဒါကပထမဦးဆုံးကမ္ဘာ့ကုန်တိုက်စီးပွားရေးမြင့်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပင်, စက်ရုံတွေတတိယကမ္ဘာသို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။ အမျိုးအစားကွဲပြားမှုနိမ့်ကျမှုတို့နင့်ဆက်စပ်နေပါတယ် အတိတ်ကာလမှာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနိမ့်ကျမှုဟာ ငွေ ကြေးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုနင့် တခြားရင်းမြစ် ဆန့်ထုတ်မှုကိုအဓိက ပတ်သက်နေပါတယ်
ထိုထုတ်ကုန်များဟာ လုပ်ဆောင် ခံရပြီး ဒါမှမဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင် ခံရပြီး ဒါမှမဟုတ် နယ်ချဲ့ဝါဒီဖွံ့ဖြိုးပြီးနိင် ငံများရဲ့ြ့ကီးမားကျယ်ပြန့်သောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများသို့စီးဝင် သွားပါတယ်ုတတိယကမ္ဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာ
စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးလာပြီးမတူကွဲပြားလာတာနင့် အမျှ ထိုအရာ ရဲ့အဓိကအ ခြေခံအကျိုးမြတ်က တတိယကမ္ဘာက လူတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးပထမ ကမ္ဘာရဲ့လူတွေအတွက်သာဖြစ်နေပါတယ်
တခြားနည်းနင့် စဥ်းစားမည်ဆိုလျှင် တတိယကမ္ဘာနိင် ငံတွေကထုတ်လုပ်နေလျှင် ပင် တန်ဖိုးတွေက တော့ပထမကမ္ဘာဆီသို့သာတိုက် ရိုက် ဦးတည်နေပါတယ် အဓိကအကျိုးအမြတ်အားလုံးဟာနယ်ချဲ့ဝါဒီတွေနင့်နယ်ချဲ့နိင် ငံကြီးများမှလူများအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြော ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာစက်မှူလုပ်ငန်းနင့်ကွဲပြားမှုရဲ့ လုံးဝရိုးရှင်းတဲ့ အ ကြောင်းအရာမဟုတ်ပါဘူး ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနိမ့်ကျမှုကလည်းအဲဒီအရာတွေ ရိုးရှင်းစွာ ကင်းမဲ့မှု ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ ခတ်ေမှာပထမကမ္ဘာရောတတိယကမ္ဘာရောပါ တိုးတက်စွာဖွံ့ဖြိုးလာနေပါတယ်ပထမကမ္ဘာဟာထုတ်လုပ်မီုလျော့ပါးကာပိုမိုသုံးစွဲလေတတိယကမ္ဘာပေါ်မှာမှီခိုကပ်တွယ်လေဖြစ်လာပါတယ်
(၂)ဒီမိုက ရေစီအသစ်တွေဟာ ပုံစံအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုပါတယ် အတိတ်ကာလမှာ နယ်ချဲ့ဝါဒီများဟာကမ္ဘာကြီးကို ရိုးရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနိမ့်ကျသောနိင် ငံများနင့်ရိုးရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိင်ငံများဟူ၍ ခွဲခြားထားခဲ့ပါတယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနိမ့်ကျသောနိင် ငံများကိုဖော်ပြရာမှာနည်းလမ်းမျိုးစုံ ပုံစံမျိုးစုံရှိပါတယ် အကြိုပ ဒေသရာဇ်စနစ်
အရငိးရှင် စနစ ဗြူရိုကရက်အရင်းရှင် စနစ်စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ် အဲဒါရဲ့ တစ်ခုတည်းသောအရာက တော့တတိယကမ္ဘာကိုပုံစံနစ်မျိုးနင့်ဖော်ပြနိင် ပါတယ် ပထမအဆင့်က တော့ဒီမိုက ရက်တစ်အသစ် အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အသစ်ဒီမိုက ရက်တစ်တော်လှန်ရေးဟာ အလုပ်သမားများလယ်သမားများဓနရှင် လူတန်းစားများဟာ နယ်ချဲ့ဝါဒီတွေကိုဆန့်ကျင် ကာ နယ်မြေပြန်လည် အမျိုးသားတိုးတက်မှု အ ခြေခံဒီမိုကရက်တစ် ပြန်လည်ထွန်းသစ်မှုတို့မှာစည်းလုံးညီညွတ်ကြပါတယ်
ဒီမိုကရေစီသစ်တော်လှန်ရေးဒုတိယအဆင့်အတွက်အခြေခံရေးသားထားပါတယ်။ ဒုတိယအဆင့်အ proletariat နောက်ထပ်၎င်း၏အကျိုးစီးပွားအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း reorganizes ဘယ်မှာဆိုရှယ်လစ်ဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကွန်မြူနစ်ဝါဒများအတွက်အခြေခံအပေါင်းတို့, ဖိနှိပ်မှုများ၏အဆုံးရေးသားထားပါတယ်။ တတိယကမ္ဘာရှိဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်း၏ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝယနေ့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အနာဂတ်မှာ၏နယူးဒီမိုကရေစီပါတီသေချာပေါက်ပေါ်အခြေခံပြီးတစ်စိုက်ပျိုးရေးကိစ္စမဖြစ်စေခြင်းငှါ “ဟုအဆိုပါဒါကိုမှမြေယာ။ ” ဒါဟာမှာအားလုံးပြည်ကိုရုန်းကန်မှုများအပေါ်အခြေခံပြီးမည်မဟုတ်ပါ။
အဲဒါဟာ ကျေးလက်ဒေသမှာအတည်ချ ဗဟိုမသတ်မှတ်နိင် ပါဘူး ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်အဆင့်အတန်းများ သူတို့တွေနင့်သက်ဆိုင် သောအမိုးအကာများဟာ သူတို့တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင် ကုန်သွယ်မှုနင့် စီးပွားရေးများဟာယေဘုယျအားဖြင့် ရပ်တည်နေပြီ်းစောဦးစွာပိုမိုကောင်းမွန်သော တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် နင့် ဒီမိုက ရေစီအသစ် ရဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအစိတ်ပိုင်းများဖြစ်လာပါတယ် ဒါမှမဟုတ်အဲဒါဟာ တတိယကမ္ဘာက ဆိုရှယ်လစ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ ဆို ရှယ်လစ်တော်လှန် ရေးပုံစံအသစ် ရဲ့အ ခြေခံကျသော အရာတစ်ခုဖြစ်လာနိင် ပါတယ်
(၃) တော်လှန်ရေးအင် အားစုတွေဟာ အရမ်းပုံစံအသစ်များနဲ့ စတင် ပါတယ်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဟာတတိယကမ္ဘာမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနိမ့်ကျတဲ့နိင် ငံများမှလူများကို လူမှုထုတ်ကုန်အားလုံးအားမထည့်သွင်းပါဘူးဒါပေမယ့် အစွန်းနစ်ဖက်မှာဘဲရှင် သန်ကျန် ရစ်အောင် လုပ်နေပါတယ်သူတို့တွေရဲ့အများစုဟာ ဒုက္ခသည်စခန်းများဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးအကူအညီများနင့် ရှင် သန် ရပ်တည်နေရပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာဘဲ တတိယကမ္ဘာမှအချို့အစိတ်အပိုင်းများဟာ သူတို့တွေရဲ့လုပ်အားခထက် ပိုမိုလျော့နည်းစွာ ရရှိတဲ့ဝင် ငွေနင့် ပင် ပန်းဆင်းရဲစွာရပ်တည် နေရတဲ့လူအများလည်းများစွာ ရှိပါတယ်
အဲ ပထမကမ္ဘာမှအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတန်းစားများဟာတစ်ခါတစ် ရံမှာ တတိယကမ္ဘာအထဲမှာအလုပ်သမားများထက် ပိုမိုအခွင့်အလမ်းများရှိကြပါတယ်ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားရဲ့ချိတ်ဆက်မှုက တော့ အတန်းအစားတစ်ခု ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအားတွေနဲ့မချိတ်ဆက်ထားပါဘူး ဒါပေမယ့်လူမှု ဘဝအထိုင် ကျမှုနင့်ဆင်းရဲနိမ့်ကျမှုတို့နင့် ချိတ်ဆက်ထားပါတယ် ကမ္ဘာရဲ့ နေရာအချို့မှာ
ဘာမှဆုံးရှုံးစရာမရှိဘူးဒါပေမယ့်အခွင့် အေ ရးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာ အရင်းရှင် ဝါဒီများအားသူတို့တွေရဲ့လုပ်အားတွေကို ရောင်းချတဲ့လူတွေအတွက်အမြဲမဖြစ်ပါဘူး
(၄)တတိယကမ္ဘာ၏အတန်းဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်ပြောင်းလဲ, ဒါကြောင့်ပထမကမ္ဘာ့ဖလား၏အတန်းတည်ဆောက်ပုံရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပထမကမ္ဘာ့ဖလား၌, တော်လှန်ရေးသမားအတန်းအစားအခင်းဖြစ်ပွားရာကနေလွန်ပြီ။ 1960 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးတော်လှန်ရေးလူမှုရေးအခြေစိုက်စခန်းပထမကမ္ဘာ့ဖလား၏မခြားသောစခန်းများတွင်နှင့်ချုပ်ထားလျက်ရှိသောလူအမျိုးမျိုးအတွင်းတည်ရှိကြောင်းစဉ်းစားဘို့အအချို့သောအခြေခံရှိ၏။ ထိုသို့သောအခြေယနေ့လည်းမရှိခဲ့ချေသည်။ အဘယ်သူမျှမအရေးပါသောပထမဦးစွာကမ္ဘာ့တော်လှန်ရေးအတန်းအစားမရှိ, သိသာထင်ရှားသောပထမဦးစွာကမ္ဘာ့ဖလား proletariat ရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာရပ်တည်ချက်အတွက်ပထမဦးစွာကမ္ဘာ့တော်လှန်ရေးအတန်းအစားရှိပါတယ်။ ဤသည်ကျွန်တော်တစ်ဦးတော်လှန်ရေးလူမှုရေးအခြေအဘို့အပထမကမ္ဘာ့ဖလားထက်ကျော်လွန်ကြည့်ရှုရမည်ဟုဆိုလိုသည်။
အဲဒါဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင် ရာပြည်သူ့စစ်ဟာပထမကမ္ဘာဆီသို့ အ ခြေခံကျသောအဓိပ္ပာယ်များကိုဆောင် ကျဉ်းပေးလာတဲ့စွမ်းအင် အသစ်ကိုဆိုလိုပါတယ်
(၅) ကမ္ဘာလုံးဆိုင် ရာဆင်းရဲမွဲတေမှုကြီးထွားလာမှုနင့် ပစ္စည်း
ရိုးရာ မော့်စ် စစ်ပုံစံနောက်ကိုလိုက် နေပါတယ်အဲဒါဟာ အသစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကွန်မြူနစ်နည်းလမ်းအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအ ခြေခံဒေသများနင့် အနီ ဒေသများမှ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လယ်သမားများရဲ့ ဦးဆောင် မှုနင့် အသွင် ပုံစံတူပါတယ် အဲဒါဟာ ဒီမိုက ရက်တစ်အသစ် အင် အားစုများအထူးသဖြင့် နယ်မြေအတွက်ကြိုးစားမှုများနင့်ဆက်စပ်နေပါတယ် အဲဒါဟာ ကျေးလက်ဒေသမှ မြို့ကြီးများသို့ ဆက်စပ်ချီတက်သွားမယ့်လမ်းဖြစ်လာပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ပြောင်းလဲမှုဟာဒီပုံစံဆိုပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး တစ်ချိုံ Geographies တွေဟာ ရှေးရိုးမော့်စ်ဆစ် ပုံစံနင့်ပြသာနာများကိုဖန်တီးကြပါတယ်နယ်ချဲ့ဝါဒီတွေ ရဲ့အင် အားကြီးထွားလာမှုကလည်း ရှေးရိုးအ ခြေခံနယ်မြေများနင့် အနီရောင် ဒေသများကိုသိမ်းသွင်းဖို့ ရန်စွမ်းရည်ကို ထိခိုက်လာမှာပါ အ ရေးကြီးဆုံးက တော့ကျေးလက်ဒေသမှ လူများဟာ ပြညိသူ့စစ်ပွဲမှာ ကျေးလက်ဒေသမှဆင်းရဲသားလူများရဲ့ အ ရေးပါမှုကို ဖန်တီးရပါမယ်
(၆) အဲဒီမှာကြီးထွားလာတဲ့စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်မှု ရှိပါတယ် အရင်းရှင် စနစ်ဟာကျွန်တော်တို့ ရဲ့အဓိပ္ပာယ် ရှိမှုကိုကျော်လွန်ပြီးအကန့်အသတ်မဲ့ဖြန့်ဝေမှု အ ပေါ်အ ခြေခံပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့အရင်းအမြစ်များဟာအကန့်အသတ် ရှိပါတယ် ထို့ကြောင့် အရင်းရှင် ဝါဒဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကြာ ရှည်စွာ ရှင် သန် ရပ်တည်ဖို့အတွက်မသင့် လျော်ပါဘူးပထမကမ္ဘာရဲ့သုံးစွဲဖြုန်းတီးမှုဟာဝေစုကိုကျော်လွန် နေသဖြင့် အဲဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်စီးပွားရေးပျက်ကပ်ကိုဦးတည်နေပါတယ် ပတ်ဝန်းကျင် များဟာလည်းလူသားတွေရဲ့မဆင် မခြင် လုပ်မှုများကြောင့် ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ် အနာဂတ် ရဲ့ တော်လှန်ရေးသမားများဟာအဲဒီဗျူဟာများကိုဦးနောက်ထဲဆီသို့ သွတ်သွင်းရပါမယ် တော်လှန်ရေးသမားများဟာလူမှုဆက်ဆံရေး
နင့် ထုတ်လုပ်မှုအားများသာကိုသာစိစစ် ရမှာမဟုတ်ပါဘူးထုတ်လုပ် မှုရဲ့ အ ခြေအ နေ တွေက်ိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်နိင် ရပါမယ် တော်လှန်ရေးသမားများဟာဦးနောက်ထဲဆီသို့ သဘာဝ ကမ္ဘာကြီးကိုယူဆောင် သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ် ဆိုရှယ်လစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာအရင်းအမြစ်များကိုဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးနိင် တဲ့အသုံးပြုခံနေ ရ သောသဘာဝတရားကြီးကို မဖန်တီးနိင် ပါဘူး
အနာဂတ် ရဲ့စွမ်းအင် အသစ်ဟာစီးပွားရေးဆိုင် ရာထိန်းသိမ်းနိင် ဖို့ ရန်လိုအပ်လာပါတယ်
ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှ သက် ရှိအားလုံးရဲ့အသက် ရှင် ရပ်တည်မှုဟာထို အချက် ပေါ်မှာတည် ရှိနေပါတယ်
(၇)နည်းပညာအသစ်များနင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမိုဘိုင်းနည်းပညာများဟာတော်လှန် ရေးအတွက် လမ်းအသစ်များကိုဖွင့် လှစ်ပေးနေပါတယ် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ် ရေးနင့် နည်းပညာတိုးတက်မှုများဟာတော်လှန် ရေးဟာအ ရေးကြီးသောလမ်းများနင့် အရှိန်အဟုန်မြင့် စွာတိုးတက်လာနေပါတယ်
အရှိန်အဟုန်များဟာအခုချိန်မှာ ပိုမို ပြင်းထန်လာနိင် ပါတယ် နေရာတစ်ခုမှာ ရှိတဲ့ဖြစ် ရပ်များဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အ ခြေအ နေ များနင့်ဖြစ် ရပ်များကို လွယ်ကူစွာလွှမ်းမိုးနိင် ပါတယ် အ ရေးကြီးတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတော်လှန် ရေးဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင် ရာ လွှမ်းမိုးနိင် မှာပါနည်းပညာအသစ်များဟာ တော်လှန်ရေးဟာဘယ်လိုဖန်တီးလဲဆိုတာ
လမ်းကြောင်းသက် ရောက်မှုတစ်ခုကို တွေ့လာနိင် ပါတယ် နည်းပညာအသစ်များဟာ
ဆို ရှယ်လစ်ဆောက်လုပ် ရေးမှာ အသစ်ဖြစ်နိင် ချေများအဖြစ် ဆန်းသစ်လာတာကို တွေ့မြင် မှာပါ
အလင်းရောင် ဆောင် ကျဉ်းပေးသူကွန်မြူနစ်ဝါဒဟာ နည်းလမ်းအားလုံးလိုလိုမှာပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားတဲ့တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဟာ ဘာ့ကြောင့် အလင်းရောင် ဆောင် ကျဉ်းပေးသူကွန်မြူနစ် ဝါဒဟာတော်လှန်ရေးသိပံ္ပပညာရဲ့စတိတ်စင် တစ်ခုဖြစ်နေလဲဆိုတာကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာမှာပါ အဲဒါဟာယ နေ့ခေတ်တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာ ရဲ့ အ ခြေခံအချက်ပါ စီးပွားရေးဆိုင် ရာနိင် ငံရေးဟာ တော်လှန် ရေးလုပ်ဖို့ ရန် သော့တစ် ချောင်းပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါဟာဝါဒပိုင်းဆိုင် ရာအစစ်အမှန်တစ်ခု ရဲ့ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားသောအရာများကိုကန့်သတ်ဖို့ ရန် မလုံလောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ပြန်လည်ဆန်းသစ် မှုများနင့် လိုက်ဖက်ညီဖို့ ဆို လျှင် ဒီနေ့ခေတ် ရဲ့စိန်ခေါ်မှုများကို ရင် ဆိုင် ဖို့ရန် အဖွဲ့အစည်းဆိုင် ရာပုံစံများကို တစ်ဖန်ပြန်လည်ဆန်းသပ် ရပါမယ် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဝါဒပိုင်းဆိုင် ရာအစစ်အမှန်ကို ရင် ဆိုင် ဖို့ ဦးဆောင် ဖို့ ရာတွင် သာ မ ကြောက် ရမှာမဟုတ်ပါဘူး
တစ်ကယ်လက် တွေ့မြေပြင် ပေါ်မှာလည်းရင် ဆိုင် ရမှာပါ ကျွန်တော်တို့မှာ အဖွဲံအစည်းခေါင်းဆောင် မှု အစီအစဉ် ရှိပါတယ် အလင်းရောင်ဆောင် ကျဉ်းပေးသူနောက် လိုက်ပါအလင်းရောင် ဆောင် ကျဉ်းပေးသူအဖြစ် ခံယူပါ
← ပထမကမ္ဘာသားတွေဟာဆို ရှယ်လစ်စနစ်မှ အကျိုးအမြတ် ရနိင် မလား?
ဘာသာ ရေးအ ပေါ်အထင် အမြင် တစ်ချို့ →